"Ikhaya elikude nekhaya" - I-Airbnb
"Ikhaya elikude nekhaya"
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguJacinta
Indlu yi-bungalow enefenitshala epheleleyo ehlala iindwendwe ezi-6, kunye namagumbi amabini okulala abucala anomoya kunye namagumbi okuhlambela ancanyathiselwe. Indawo yokuhlala, yokutyela, igadi yepatio, kunye nekhitshi kunokwabelwana nomnini ohlala kwigumbi lesithathu lokulala
Amaxabiso ngabantu aba-2 njengoko kubonisiwe kolu luhlu, Ukuba iindwendwe ezi-2 zokuqala zihlala kumagumbi okulala ama-2 ahlukeneyo intlawulo eyongezelelweyo iyahlawulwa njengoko isebenza kundwendwe lwesi-3 (emva kwe-2)
Ixabiso elixoxisanayo kumaqela amakhulu ngaphezulu kwe-6 kunye nokudibana. Ukutya kunikezelwe ngexabiso
I-bungalow entle ezimeleyo enamagumbi okulala abucala anomoya kwindawo ezolileyo nenoxolo. Ngokwenene likhaya elikude nekhaya elinendawo yalo ezolileyo, uxolo kunye nesimilo.
Ukutya kunokubonelelwa ngeodolo.
Kufuphi kufutshane nesixeko esikhulu seePearls, iindawo zokuthenga, iholo yemiboniso bhanyabhanya, iiKlabhu kunye neevenkile ezinkulu
Ukusondela kwisikolo sikarhulumente saseDelhi, uAnand Buddha Vihar, Amritanandamayi ashram, izibhedlele kunye neklabhu yeSecunderabad AOC Centre
Amaziko okuthenga. Ithiyetha bhanya-bhanya, iPearl kunye neemarike zobucwebe zaseSecunderabad
Ngokwenyani iyure yokuqhuba ukuya kuzo zonke iindawo ezibonwayo ezixekweni
Indawo efanelekileyo yokuhlala xa kuhambo - ishishini okanye ulonwabo.
Umbuki zindwendwe ngu- Jacinta
I am a former officer of the Government of India - IRS
My entire bungalow with two bedrooms, living, family room, kitchen, patio and party place is available for a comfortable and convenient stay at the heart of the twin cities of Hyderabad and Secunderabad.
I will be staying in the third bedroom and share common areas
Break fast provided. All other meals provided at cost basis.
My entire bungalow with two bedrooms, living, family room, kitchen, patio and party place is available for a comf…
Umgcini-mgcini uNksk Laxmi, ulawula utyando kwaye ulungiselela iimfuno zemihla ngemihla ngalo naliphi na ixesha.
Isidlo sakusasa / sasemini / isidlo sangokuhlwa sinokubonelelwa ngexabiso leendleko